"Kunoo Eefraataatti dhageenye; bosona keessattis Isa arganne. Gara bultiiwwansaatti ni seenna;bakka miilonnisaa dhaabatanitti ni saganna" (Faar. 131: 6-7)
Ajaja kana cabsinaan du'a du'aa akka du'an isaan akeekkachiise. Addaamii fi Heewaan garuu ajaja Waaqayyoo dagachuun, gorsa bofaa dhagahanii muka hin nyaatiinaa jedhaman nyaatani (Uum. 3: 1-24). Waaqayyo Uumaanis balleessaasaanii itti dheekkame. Jannata keessaas isaan baase. Du'a fooniirratti du'a lubbuu, gara awwaalaatti fooniin bu'uurratti, lubbuun Si'ool bu'uu isaaitti murteesse. Balleessaa Addaam balleesseen cubbuun ilmaan namootaa hundarratti aangome; ilmi namaa hunduu cubbamaa ta'e (Room. 5: 12).
Read more: DHALOOTA GOOFTAA KEENYA IYYASUUS KIRISToos
Read more: «Yaa mucaa koo dhaga’i mana abbaa kees irranfadhu; mootiin miidhagna kee jaalateeraatii!»...